‘२.०’ ले रिलिज अगाडि नै कमायाे २ सय करोड ! « News24 : Premium News Channel
‘२.०’ ले रिलिज अगाडि नै कमायाे २ सय करोड !
सिनेमामा कलाकारहरुको लुक्स र महंगो बजेटमा बनेका कारण चर्चामा रहेको सिनेमा ‘२.०’ फेरि स्याटलाईट अधिकारका कारण चर्चामा आएको छ । खासमा रजनीकान्त र अक्षय कुमारको मुख्य भूमिका रहेको यस सिनेमाको स्याटलाईट अधिकार १ सय १० करोड भारतीय रुपैयाँमा विक्रि भएको छ ।
यो सिनेमाको तिनवटै संस्करण (हिन्दी, तमिल र तेलुगु) को स्याटलाईट अधिकार मुल्य हो । यति मात्रै नभएर निर्माताले सिनेमाको थियट्रिकल अधिकार ८० करोडमा बेचेको खबर छ । यस हिसाबले सिनेमाले रिलिज अगाडि नै झण्डै २ सय करोड कमाएको छ ।
सन् २०१० को सिनेमा ‘रोबोट’को सिक्वेल ‘२.०’ निर्माणमा ४ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माणमा लागेको लगानीका हिसाबले यो भारतको सबैभन्दा मंहगो सिनेमा बनेको छ । यो सिनेमालाई ‘लिका प्रोडक्शन’का फाउण्डर सुबास्करण अलिराजाले निर्माण गरेका हुन् भने शंकरले निर्देशन ।
सिनेमामा रजनीकान्त र अक्षय कुमारका अलावा एमी ज्याक्शन, सुधांशु पाण्डे, आदिल हुसैन, रियाज खान लगायतका कलाकारहरुको पनि मुख्य भूमिका छ । सन् २०१८ मा रिलिज हुने तयारीमा रहेको यस सिनेमाको अडियोसँगै केही पोस्टरहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् ।
यस अघि मोटो रकममा स्याटलाईट अधिकार बिक्रि गरेका सिनेमाहरुमा बाहुबली–२ (९६ करोड भारतीय रुपैयाँ), दंगल (७५ करोड भारतीय रुपैयाँ), धुम–३ (७५ करोड भारतीय रुपैयाँ), दिलवाले (६० करोड भारतीय रुपैयाँ), सुल्तान (५५ करोड भारतीय रुपैयाँ), रईस (४५ करोड भारतीय रुपैयाँ), काबिल (४५ करोड भारतीय रुपैयाँ) लगायतका सिनेमाहरु छन् ।